#Gareth Bale ayaa sii joogi doona Real Madrid inkastoo wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga ay jiraan, sidaasi waxaa yiri Guillem Balague | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Gareth Bale ayaa sii joogi doona Real Madrid inkastoo wararka xanta ah...
#Gareth Bale ayaa sii joogi doona Real Madrid inkastoo wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga ay jiraan, sidaasi waxaa yiri Guillem Balague
Weerar yahanka Real Madrid ee Gareth Bale, ayaa wuxuu usheegay maamulka ugu sareeya ee kooxdiisa inuu doonayo ku biirista Manchester United, oo dalka UK, ka dhisan, sida laga soo xigtay Shabakada Daily Express.
28-sano jirkaan ayaa waxaa uu ka dhacayaa qandaraaskiisa ku joogo kooxda Yurub ugu fiican sanadka 2020, laakiin waxaa la sheegayaa inuu doonayo ka tegista Boqorada horyaalka La Liga.
Waxaa aad loola xiriirinayaa inuu ku biirayo Man United, halkaasoo uu ka helayo xiiso badan, waxaana dhaqawaan kasoo yeeray uu yahay mid wadnaha jari kara taageerayaasha Real, balse wuxuu farxad uyahay kuwa Man United.
United ayaa ku guul dareysatay inay lasoo wareegto Bale, sanad ciyaareedkii lasoo dhaafay, markaasoo wiilkaan lala xiriirinayay inuu ka tagayo Los Blancos.
Laakiin, warkaan ay hada sheegeyso Shabakada Daily Express ayaa wuxuu yahay mid dib sabab u ah inuu noqday mid dhaawacyo ay hareeyeen waayihiisa Madrid, wuxuuna muuqdaa mid raba inuu bedasho cimilada ama Jawiga.
Bale ayaa Real, uu uga soo biiray kooxda Tottenham, markaasoo lagu soo iibsadey aduun lacageed dhan 100 Malyuun oo Yuuroo, isagoona xiligaas noqday xidiga aduunka ugu qaalisan, balse sanado kadib lagala wareegay booskaas.